Niakatra ho any amin’ny laharana voalohany mitovy amin’ny Japan Actuel’s tampoka, taorian’ny andro faharoa ho an’ny fiadana ny hio tompondakan’i Madagasikara ny ekipan’Ivato Seranana. Isa 2 no ho 1 no nisarahan’ny roa tonta na dia notarika tamin’ny isa aza ireo zandrikelin’Itaosy. Raha ny filaharana vonjimaika dia ny AS Adema sy ny Japan Actuel’s no mitarika amin’ny isa 4. Manana isa 4 tahaka azy ireo ihany koa ny ekipa vao niakatra (Dartline). Mitovy kosa ny isas, samy 3, eo amin’ny Ajesaia, saingy ny baolina nampiditra no nampiavaka azy ireo.
Eo amin’ny laharana fahenina sy fahafito kosa ny Cospn sy ny Cosfa, samy manana isa 2. Milahatra any amin’ny farany amin’ny alalan’ny isa tokana avy kosa ny Assm, Vesta Team ary ny Iarivo FC.